मुलुकलाई जातिय द्धन्द्धमा फसाउन भएन – एमाले नेता गौतम-Nagarikaawaj.com
मुलुकलाई जातिय द्धन्द्धमा फसाउन भएन – एमाले नेता गौतम
बिहिबार, कार्तिक ७, २०७०
बुटवल, ७ कार्तिक । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष नेता बामदेब गौतमले जातीयताको नारा उठाएर एमाओबादीले मूलुक समाप्त गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । एकल जतीयताको नारा उठाएर मुलुकलाई जातीय द्धन्द्धमा फसाएर मुलुकलाई समाप्त गर्न खोजेको बताउनुभयो ।
नेकपा एमाले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ को बिहिबार क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटन गर्दै नेता गौतमले अहिलेको संबिधानसभामा पनि बिगतको जस्तै नतिजा आए मुलुक खतम हुने बताउनुभयो । ‘एमाओबादीले देशलाई समाप्त पार्ने योजना बनाएको छ, उहाले भन्नुभयो–‘त्यसलाई रोक्नका लागि एमाओबादीलाई चुनाबमा परास्त गर्नुपर्छ ।’ बाहिर राष्ट्रियता भन्दै भक्ति गर्ने तर देशको नाम, झण्डा फेर्ने कुरा उठाएर एमाओबादीले आफ्नो योजना अगाडी बढाउने खोजेको उहाले जिकिर गर्नुभयो ।
जंगलमा बिचल्ली अवस्थामा रहेको माओबादीलाई एमालेले शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर उद्धार गरेको उहाको दाबि छ । ‘लडेर न जित्ने, न उपलब्धी हुने अवस्थामा माओबादी पुगेको थियो, एमालेले नै उद्धार गरेर ल्यायो, उहाले भन्नुभयो । एमालेकै साहारामा शान्तिप्रक्रियामा आएको माओबादीले अघिल्लो संबिधानसभामा एमालेलाई नै मत खसाल्न रोकेको बताउनुभयो । ‘एमाले कांग्रेसका लाखौ मत माओबादीले रोकेको थियो, अव त्यस्तो हुदैन, उहाले भन्नुभयो ।
एमाओबादी पहिलो शक्ति भएकै कारण संसारमा कहि नभएको दोस्रो संबिधान सभाको निर्बाचन नेपालमा भएको उहाको भनाई छ । संबिधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्नका लागि एमालेलाई बहुमत आवश्यक रहेको नेता गौतमले बताउनुभयो । इतिहासका एक दुई कुरा बाहेक कलंककै रुपमा स्थापित नेपाली कांग्रेस र राष्ट्र समाप्त गर्न खोजेको माओबादीलाई जनताले मत दिए नेपाल देशको अस्थित्व नरहने उहाँको दावि छ । ‘देशको अस्थित्व रक्षाको लागि र संबिधान निर्माणका लागि एमालेलाई बहुमतको आवश्यक रहेको छ, उहाले भन्नुभयो ।
लुम्बिनी अञ्चलबाट मात्रै नभई एमालेले देशभरबाट बहुमत ल्याउने बताउनुभयो । ‘अव आउने बहुमत स्थाथी मत हो कहिल्यै तल झर्ने छैन, उहाले भन्नुभयो–‘कांग्रेस र एमाओबादी कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी यो निर्बाचनमा पछारिने पक्का छ ।’
रुपन्देही अग्रेजहरुलाई हराएको देशको किल्ला भएको प्रसंग कोट्याउदै उपाध्यक्ष गौतमले रुपन्देहीमा बिदेशीको भक्तले जीत हासिल गर्न नसक्ने बताउनुभयो । एमाओबादीका क्षेत्र नम्बर ४ का उमेदबार डा. बाबुराम भट्टराई बिदेशीको भक्त भएको भन्दै उहाले रुपन्देहीमा एमालेको जीत सुनिश्चित भएको दाबि गर्नुभयो । बाबुरामले नेपाल भारतलाई हस्तान्तरण गरे भन्न मात्र बाकी रहेको उहाले आरोप लगाउनुभयो । ‘विप्पा सम्झौता देखि बिमानस्थल भारतलाई जिम्मा दिने निर्णय बाबुरामले नै गरेका हुन, उहाले भन्नुभयो–‘अव देश लैजानुस भन्न मात्र बाकी छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै एमाले सचिव तथा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ का उमेदबार बिष्णु पौडेलले अग्रगामी संबिधान निर्माणका लागि एमाले संबिधानसभाको पहिलो पार्टी हुनुपर्ने बताउनुभयो । देशको जिम्मेबारी नेकपा एमालेमा आएको भन्दै उहाले एमालेलाई बहुमत दिए जिताउन मतदातालाई आग्रह गर्नुभयो ।
रुपन्देहीको बिकास निर्माणमा एमालेले नया योजना ल्याएको भन्दै उहाले देशकै नमुना जिल्ला बनाउने प्रतिबद्धता समेत उहाले व्यक्त गर्नुभयो । ‘रुपन्देहीलाई बिकासको रोलमोडल निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं, उहाले भन्नुभयो । रुपन्देही ४ मा सञ्चालन भएका योजनाहरु एमालेकै योजनाअनुरुप सञ्चालन भइरहेको उहाको जिकिर छ ।
रुपन्देही जिल्ला एमालेको किल्ला भएको बताउदै नेता पौडेलले कसैले हल्लाउने नसक्ने दाबि गर्नुभयो । ‘रुपन्देही पहराजस्तै उभिएको छ, कसैले कुहिनो ठोक्काउन आए त्यो आफै परास्त हुनेछन, उहाले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा एमालेका केन्द्रिय सदस्य तथा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ का उमेदबार घनश्याम भुसालले संबिधान निर्माणको सुनिश्चिताको लागि एमालेलाई बहुमत आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा केन्द्रिय सदस्य राधा ज्ञवाली, नेत्र पन्थी, युवा संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष राजु गुरुङ, एमाले अञ्चल सचिव खिमलाल भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठ लगायतले बोल्नुभएको थियो । सो अवसरमा करिव ४ सय कार्यकर्ता एमालेमा प्रबेश गरेका थिए ।
यस्तै निर्बाचन क्षेत्र नम्बर ३ अन्र्तगत मणिग्राममा भएको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले एकीकृत माओवादीले जातीय नारा बोकेर मुलुकमा बिखण्डन ल्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
जातीय नाराकै कारण अघिल्लो संविधानसभा असफल भएको र त्यसमा माओवादीको प्रभुत्व मुख्य जिम्मेवार रहेको गौतमको भनाई छ । पुर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष गौतमले अवको निर्वाचनमा जनताले जातीय राज्यको वकालत गर्ने पार्टीलाई पाखा लगाइदिने बताउनुभयो ।
“एमाओवादीले उठाएको जातीय नाराले अघिल्लो संविधानसभा असफल भएको हो, यसका साथै एमाओवादीले संविधान निर्माणका लागि इमान्दारिताका साथ भूमिका खेलेन”–उहाँले भन्नुभयो ।
एमालेले पार्टीको घोषणापत्रमा राज्य पुनःसंरचनाको खाका स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै बहुपहिचानका आधारमा निर्माणन गरिने ७ प्रदेशले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने दावी गर्नुभयो । “एमाओवादीको संघीयताले मुलुकमा बिखण्डन ल्याउँछ, तर एमालेको संघीयताले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउँछ”–गौतमले भन्नुभयो ।
भेलालाई संबोधन गर्दै एमाले सचिव तथा रुपन्देही क्षेत्र नं. ४ का उम्मेदवार विष्णु पौडेलले बिजुली, सिंचाई, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण, खानेपानी जस्ता आयोजनाहरुबाट रुपन्देही जिल्लालाई देशकै नमुना बनाइने बताउनुभयो । देशका सबै जिल्लालाई विकासको सिको गर्न रुपन्देही जानुपर्छ भन्ने सन्देश देशभर फैलाईने पौडेलको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा क्षेत्र नं. ३ रुपन्देहीका उम्मेदवार घनश्याम भुसालले एमालेले २०५१ सालमा ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन अबको निर्वाचनमा आफ्नो दललाई बहुमतले विजयी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । काँग्रेस र एमाओवादीले विकासका झुटा आश्वासन बाँडेर जनतालाई भ्रममा पारिरहेको आरोप लगाउँदै भुसालले वास्तविक रुपमा विकास गर्ने पार्टी एमाले मात्रै रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
क्षेत्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीका संयोजक सुरेन्द्र बर्माको संयोजकत्वमा भएको आम भेलामा एमाले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य लिला गिरी, रामप्रसाद रेग्मी, वासुदेव घिमिरे, कृष्ण भुसाल लगायतले बोल्नुभएको थियो ।
त्यस अवसरमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गर्नेहरुलाई स्वागत गरिएको थियो ।
एमाले प्रचार कार्यालयको उद्घाटन
बुटवल, कार्तिक ७ । सामाजिक विभेदको अन्त्य गरी समतामुलक समाजको निर्माण गर्न नेकपा एमाले प्रतिवद्ध रहेको पार्टीका पोलिटव्युरो सदस्य छविलाल विश्वकर्माले बताउनु भएको छ । रुपन्देहीको पजरकट्टी गाविसमा निर्वाचन परिचालन कार्यालयको उद्घाटन गर्दै नेता विश्वकर्माले विभिन्न जातजाति,धर्म र संस्कृतिको संरक्षणका लागि एमालेसँग स्पष्ट खाका रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
नेकपा एमाले क्षेत्र नं १ का प्रत्यासी समेत रहनु भएका नेता विश्वकर्माले आसन्न निर्वाचनमा नेकपा एमालेले वहुमत ल्याउने दावी गर्नु भयो । महेश यादवको अध्यक्षता र पार्टीका क्षेत्रिय अध्यक्ष वेद गिरीको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रतिनिधी परिषद् सदस्य डा. कृष्ण न्यौपाने, जिल्ला सदस्य शैलेन्द्र उपाध्याय, रामवृक्ष यादव, सञ्जय गुप्ता, उमापति पाण्डे, राममिलन यादव, रितेश यादव, विकाश गहतराज लगायतले बोल्दै नेकपा एमालेले जित हासिल गरे मात्र ग्रामिण क्षेत्रको विकाश हुने बताएका थिए । यसै विच उमेदवार विश्वकर्माले पजरकट्टीका विभिन्न वडाहरुमा घरदैलो गरी नागरिकसँग भेटघाट गर्नु भएको पार्टीका क्षेत्रीय अध्यक्ष वेद गिरीले बताउनु भयो ।
यसैबीच नेकपा एमालेका सँगठित सदस्य रमेश थापाले आफ्नो नाम एकिकृत माओवादीमा प्रवेश गरेको भन्दै गरीएको प्रचारप्रति खेद् व्यक्त गर्नु भएको छ । देवदह ९ निवासी थापाले आफु नेकपा एमालेको प्रतिवद्ध कार्यकर्ता भएको र हाल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सँगठन निर्वाचन परिचालन क्षेत्रीय कमिटीमा रहेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्नु भएको छ । एक विज्ञप्ती जारी गर्दै थापाले एमाओवादीले गरेको भ्रामक र गैरराजनैतिक कार्यको भ्रत्सना गर्नु भएको छ । पार्टी प्रवेशका लागि गराईएको कार्यक्रममा आफु उपस्थित नभएको र त्यसरी गरिने गलत कार्यले एमाओवादीको गलत आसय रहेको विज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।
यस्तै नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता सालिकराम पराजुली, गोरी थापा र स्वम्वरा श्रेष्ठले आफुहरुको नाम एमाओवादीमा प्रवेश गरेको भनी गरिएको प्रचार भ्रामक भएको बताउनु भएको छ । उहाँहरुले विज्ञप्ती जारी गर्दै एमाओवादीका वावुराम भट्टराई उपस्थित रहेको कार्यक्रममा आफुहरुलाई पार्टी प्रवेश गरेको भनि गरिएको प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको उल्लेख गर्नु भएको छ । आफुहरु नेकपा माओवादीको प्रतिवद्ध कार्यकर्ता रहेको र जनघाती एवम राष्ट्रघाती एमाओवादीमा प्रवेश गर्ने संभावनै नरहेको विज्ञप्तीमा जनाईएको छ । जनतालाई भ्रमित पार्न गरिएको गलत प्रचारको भ्रत्सना गर्दै त्यस्ता कार्य रोक्न एमाओवादीलाई चेतावनी दिईएको छ । यसै विच नेकपा माओवादी देवदहले एमाओवादीले गरेको गलत कार्यको भ्रत्सना गरेको जनाएको छ । जनता र पार्टीलाई दिग्भ्रमित पार्ने गरी भएको त्यस कार्यले आफुहरुलाई आक्रोशित तुल्याएको भन्दै त्यस्ता कार्यलाई अविलम्व रोक्न चेतावनी दिएको छ ।
यस्तै युवा सँघ नेपालले देवदह तथा केरवानी विभिन्न चुनावी वुथहरुमा सुरक्षा प्रदान गर्न वुथ सुरक्षा परिचालन कमिटी गठन गरेको छ । देवदहको भलुही वुथको सुरक्षाका लागि वलबहादुर थापाकोसंयोजकत्वमा ३७ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ । त्यसै गरि केरवानीको भवानीपुर वुथमा टुकबहादुर थापाको संयोजकत्वमा ४९ सदस्यीय कमिटी गठन गरीएको युवा सँघ नेपाल क्षेत्रिय कमिटीले जनाएको छ । त्यस्तै गणेश गैह्रेको संयोजकत्वमा केरवानी राजावारी वुथ सुरक्षा कमिटी गठन गठन भएको छ । युवा सँघ नेपाल रुपन्देहीका उपाध्यक्ष दुर्गा तिवारीको आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रम वसन्त पौडेल, दिपक चापागाई, शोभाकान्त भट्टराई, दिपक पाण्डे , घनश्याम भण्डारी लगायतका युवा नेताहरुले वोल्नु भएको थियो ।